Nezve JIANGSU TISCO INDUSTRIAL CO., LTD | JIANGSU TISCO INDUSTRIAL CO., LTD
JIANGSU TISCO INDUSTRIAL CO., LTD yakavambwa muna 2008, nyanzvi mukugadzira Stainless simbi coils, Stainless simbi ndiro, Stainless simbi nenyere, Stainless simbi bhaa , Stainless simbi profiles uye chiwanikwa zvigadzirwa. Mumakore gumi nemaviri apfuura, TISCO Maindasitiri yakagadzira kudyidzana kwakarongeka pamwe neakawanda anozivikanwa ekumusoro uye ezasi emakambani akadai se: MASTEEL, BAOSTEEL, TISCO, ZPSS, RIZHAO, JIGANG, SHOUGANG BOKA, SSAB, JISCO. Isu tinobatawo nezvigadzirwa zvealloy uye zvigadzirwa zveasip dicapless yesimbi yezvinhu zvepasirese zvigadzirwa sengeInconel akateedzana, Monel Series, Hastelloy Series, Titanium zvichingoenda zvakadaro.
Mushure memakore gumi nemaviri ekukurumidza kukura, TISCO Maindasitiri rave remazuva ano rakazara simbi sevhisi bhizinesi iyo yakasarudzika mukugadzirisa, kutengesa uye masevhisi masevhisi mumunda weasina zvigadzirwa zvesimbi. Tisco Industrial ine yekutanga simbi yekugadzirisa michina inopa hunyanzvi hwekugadzirisa mapuratifomu:kucheka, kukuya, kugadzira, kupisa, kupisa kupisa, machining, uye kumwaya. Zvakare, Tisco Indasitiri zvakare ine yemazuva ano mehendi uye yemakemikari yekuyedza nzvimbo yekuona zvigadzirwa zvinokodzera.
Jiangsu TISCO Maindasitiri akagadza gumi ekugadzirisa nzvimbo nzvimbo muWuxi, Wuhan, Hangzhou, Tianjin, Taiyuan, Zibo, Jingjiang, Tai'an, Jinan uye Jiaxing kuChina. Parizvino, Tisco Indasitiri inovhara nzvimbo ye1Zviuru makumi mashanuHas uye ane 1,300 vashandi. Tisco yakatsunga kuve "simbi kugadzira uye yekupa nzvimbo yekugadzira indasitiri"uye"gwapa cheni Supermarket yesimbi isina chinhu"kuChina. Mushure mekuvandudza uye kutsvaga kugona, Tisco Indasitiri ine vazhinji vanozivikanwa pasi rese, vane 100,000 matani yesimbi isina chinhu mukutengesa gore rega rega.
Bhizinesi redu rinowedzera nekuda kwekuenderera mberi kwekuvandudza mumakore ano, uye ikozvino isu tinogadzira kambani nyowani inonzi Jiangsu TISCO Industrial Co, Ltd. Jiangsu Join Industrial Co, Ltd ikozvino ibazi reJiangsu TISCO Industrial Co, Ltd.